QM75 – Fursad ay Soomaalidu Gacan uga Geysan karto Qaabeynta Arrimaha Hortabinta leh ee Adduunka – Goobjoog News
Soomaaliya iyo meelo kaleba, hay’adaha Qaramada Midoobay sida Ururka Caafimaadka Adduunka, Barnaamijka Cuntada Adduunka, Sanduuqa Carruurta ee Qaramada Midoobay, Barnaamijka Horumarinta Qaramada Midoobay ayaa caawiya malaayiin dad ah maalin kasta. QM waxay la shaqeysaa dowladaha si dadka loo siiyo fursad ay ku helaan cunno, hoy, daryeel caafimaad iyo waxbarasho.
QM waxay taageertaa abuurista shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah, waxay ka caawisaa ka hortagga iyo xallinta colaadaha, waxay dhistaa nabadda waxayna kobcisaa dib-u-heshiisiinta, waxayna dowladaha siisaa taageero wax ku ool ah oo ku saabsan arrimo fara badan – laga billaabo la dagaallanka musuqmaasuqa iyo awoodsiinta dadka naafada ah. Shaqadeeda waxay isugu jirtaa mid muuqata iyo mid aan la taaban karin.
Soomaaliya iyo Qaramada Midoobay waxay leeyihiin iskaashi dheer oo soo jireen ah muddo tobaneeyo sanno ah, markii Qaramada Midoobay ay dadka Soomaaliyeed ku garab istaagtay dhismaha dalkooda iyo waddadii madaxbannaanida ee 1960kii. Sannadihii taa ka dambeeya, bahda QM waxay Soomaalida kala shaqeysay dhinacyo badan, laga billaabo shaqada bina-aadamnimada iyo horumarinta, ilaa taageerada siyaasadeed iyo nabadayntaa.
Waqtigan xaadirka ah, marka laga soo tago Howlgalka Kaalmada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM) iyo Xafiiska Taageerada QM ee Soomaaliya (UNSOS), waxaa jira 27 hay’ad, sanduuq iyo barnaamij oo Qaramada Midoobay ah oo taageeraya dadaalka ay Soomaalidu ugu jirto waddaddada nabadda iyo xasilloonida.
Waa lagama maarmaan in codadka Soomaaliyeed lagu daro howshan dhageysiga ah. Si loo helo aragtidooda iyo rajadooda, bahda QM ee ku sugan Soomaaliya waxay qabanaysaa wadahadal khadka internetka – oo si toos ah looga soo tebinayo
Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya